Indlu eyakhiwe ngamapulangwe e-Pittsburgh. Imizuzu engu-20 ukuya e-Pittsburgh - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe e-Pittsburgh. Imizuzu engu-20 ukuya e-Pittsburgh
Sicela ungaceli ukubhukha uze uthintane nomnikazi ukuze uthole amanani.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe iyindawo ekahle kakhulu yokuhlala ngenkathi uvakashela abangane nomndeni e-Pittsburgh. Kuyimfihlo futhi kuthokomele, kuhlanzekile futhi kulula ukuya ezindaweni eziningi e-Pittsburgh. Imizuzu engu-20 kuphela ukuya edolobheni, nezinkundla zemidlalo.
Izindleko/ubusuku ngu- $ 135.00 kubantu abadala abangu-2. Abantu abadala abengeziwe (18 nangaphezulu) bayi- $ 25.00/adult/day. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18 zingu- $ 10.00/ Ingane/usuku. Izingane ezingaphansi kuka-2 ziyatholakala.
Izinja zingu- $ 5.00/usuku.
ayikho i-curry SPICE
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ihlukile ngempela ngoba yiyo kuphela esendaweni yase-Pittsburgh. Ingasese kakhulu, itholakala kuma-acres angu-15, kodwa itholakala kalula kakhulu ngokuvakashela wonke amasayithi e-Pittsburgh namaphethelo. Ihlotshiswe kahle futhi ihlanzeke kakhulu futhi ithokomele. Izivakashi eziningi zibuka ngaphandle endlini futhi zibuka ukudla kwamagilebhisi. Kukhona umpheme wokujabulela inkomishi yekhofi ekuseni noma kusihlwa sokuphumula ngemva kosuku olumatasa. Kuthule kakhulu futhi kunokuthula.
4.90 · 71 okushiwo abanye
Indawo eyakhelene iyindawo engaphansi kwemizuzu engu-20 eNyakatho-mpumalanga ye-Pittsburgh. Yindawo enhle nephephile. Iningi lamakhaya endaweni lihlezi ngokuyinhloko ku-acre eyi-1.
Kukhona ukuthenga kanye nezindawo zokudlela ezitholakala kalula kakhulu emizuzwini engu-5-10. I-Pittsburgh Mills Mall iyibanga lemizuzu engu-20 uma uhamba ngemoto.
Kukhona ipaki elihle eliseduze elibizwa ngokuthi yi-Hartwood Acres futhi linemizila eminingi yokuhamba kanye nesigodlo ongasivakashela.
Indawo eyenza iwayini ethandwayo ebizwa ngokuthi yi-Narcisi Winery iyibanga lemizuzu engu-10 uma uhamba ngemoto futhi inendawo yokudlela enhle kakhulu nesitolo sezipho. Kukhona ukuzijabulisa ezinyangeni ezifudumele.
Ngihlezi ngitholakalela iziqu zami. Ungangibamba noma nini nge-imeyili, i-SMS noma ngocingo. Ngifuna ukuhlala kwakho kube okokuzithokozisa okuhle kakhulu futhi ngizokwenza konke engingakwenza ukuze ngikwenze ngaleyo ndlela.